Goolka Philippe Coutinho uu ka dhaliyay Switzerland rikoodh noocee ah ayuu ka sameeyay koobka aduunka? – Gool FM
Frank Lampard oo si xirfadeysan uga jawaabey kooxda awood badan Chelsea iyo Bayern Munich
Imise milyan oo gini ayay bixinaysaa Kooxda Barcelona si ay Liverpool uga hesho midkooda Mohamed Salah ama Sadio Mane?
Kooxaha Man United iyo Arsenal oo ku tartamaya saxiixa xiddig muhiim ka ah Juventus
“Ma dooneyno in Liverpool ay ku guuleysato horyaalka Premier League laakiin…” – Pogba
Kooxda Horseed oo guul soo xirtay wajiga hore ee Horyaalka Somali Premier League kaddib markii ay ka adkaatay Heegan
Gerard Pique oo ka hadlay mustaqbalka Lionel Messi ee kooxda Barcelona
Horudhac: Chelsea vs Bayern Munich… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya London ee Champions League)
Horudhac: Kooxaha Napoli vs Barcelona… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya Talyaaniga ee Champions League)
Liverpool oo wali dhinaceeda dhulka la dhigi la’ayahay kaddib markii ay kaga adkaatay Anfield kooxda West Ham… +SAWIRRO
De Jong oo Barcelona kaga digay halista kaga imaan karta kooxda Napoli, ka hor kulankooda soo aaddan ee UCL
Goolka Philippe Coutinho uu ka dhaliyay Switzerland rikoodh noocee ah ayuu ka sameeyay koobka aduunka?
Dajiye June 17, 2018
(Moscow) 17 Juunyo 2018. Philippe Coutinho ayaa u suura gashay in uu xulkiisa qaranka Brazil u dhaliyo goolkooda ugu horeeya ee koobka aduunka 2018 kulanka ay haatan la ciyaarayaan dhigooda Switzerland.
Brazil ayaa haatan la ciyaareysa Switzerland kulankeeda ugu horeeya ee koobka aduunka, waxayna wiilasha seleção u muuqdaan kuwa kulankan guul gaari kara marka loo fiiriyo sida ay ciyaarta ugu gacan sareeyaan.
Laakiin sheekada xiisaha badan ayaa ah in goolkii uu Philippe Coutinho dhaliyay daqiiqadii 20-aad uu sameeyay rikoodh.
Rikoorada ayaa waxay xaqiijinayaan isla markaana ay soo bandhigayaan in goolka Philippe Coutinho uu u dhaliyay Brazil ay ka dhigan tahay kii 37-aad ee meel ka baxsan xerada ganaaxa uu xulka seleção ka dhaliyo meel ka baxsan xerada ganaaxa kulamada koobka aduunka.
Brazil ayaana rikoodhkan kaga badan 11 gool xul kasta ee tartanka qeyb kasoo noqday.
Oliver Kahn: “Waa inaan faraxsanaanaa, sababtoo ah....”
“Rakic, Modrić iyo Kovačić waxay iga caawin doonaan sida aan ku joojin lahaa Lionel Messi”… Zlatko Dalić